Soosaarayaasha & Shumaca Shumac udgoon - Warshad Shumaca udgoon ee Shiinaha - Qaybta 4
Cabbirka: D5.4CM * H7.3CM
Shumacyo yar yar oo udgoon yar
Koobkan shumaca shumaca udugga leh ayaa aad u yar. Waxay qaadi kartaa 65 garaam oo wax soy ah. Kaliya maahan mid gaar ah laakiin sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa guf, kaas oo labadaba qurux badan oo wax ku ool ah. Waxay leedahay dusha sare, waxaad dooran kartaa midabka aad jeceshahay, iyo xariir-daabac calaamadda aad rabto. Waxay aad ugu habboon tahay hadiyado xayeysiin ah oo la qaadan karo si loogu safro.
Cabbirka: Ballaca5.4CM * Dhererka7.3CM
Midabka: midab badan, waxaan sameynaa OEM ODM
Paraffin wax galaas shumac farshaxan
Shumacani wuxuu leeyahay naqshad gaar ah, ma aha oo kaliya qurux badan laakiin sidoo kale waa qurux badan. Qaabka shinbir yar ayaa shumaca muraayaddan ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. Waxaa jira cabir shamac muraayad ah oo udgoon ah si loo daboolo baahiyahaaga kala duwan. Aad ayuu u yar yahay sidaa darteed gacantaada waad ku qaban kartaa. Waxaad u isticmaali kartaa qurxinta guriga. Waad qurxin kartaa qolkaaga jiifka, waxbaran kartaa iyo meel kasta oo kale oo aad dareento inaad u baahan tahay.
Tusaale: B04T B05T
Cabbirka Yar: D6.4CM * H7.9CM
Baaxad Weyn: D6.9CM * H9CM
shumac qurxin soy wax shumacyo udgoon leh
Shumacan dhalada ah ee dhalada Mason wuxuu leeyahay saameyn dhalaalaysa waana mid aad uyar.
Waxay kufiicanyihiin kudarista taabashada qurxinta qol kasta qurxintiisa. Markay gubanayaan, waxay ku faafin doonaan caraf udgoon hawada. Kufiican isticmaalka maalin kasta, arooska, dhacdooyinka, udugga, spa, Reiki, meditation, musqusha dejinta.
Tusaale: CB01P / CB02P / CB03P
Cabbirka: 8.8cm (Width) * 8.5cm (Dherer) 7.1cm (Wareeg) * 10.4cm (Dherer)
9cm (Width) * 11cm (Dherer)
Midabka: Casaan, bunni, noo sheeg midabka aad rabto, adiga ayaan kuu caadoon karnaa
shumac muuqaal caraf udgoon leh oo caraf udgoon leh
Cabbirka: 7.1cm (Width) * 10.4cm (Dherer)
Shumackan weelka dhalada ah ee Mason weelka ayaa bixin doona in ka badan 30 saacadood oo waqti gubasho ah, markii uu dhamaadana, weelka shumaca ee shumaca ayaa ah weel dhalo ah oo dib loo isticmaali karo oo jawi saaxiibtinimo leh.
Shumacani wuxuu urayaa si yaab leh! Waa sida saxda ah ee aan doonayo gurigeygu inuu ur uro. Waxay u egtahay isku duubnaan diiran oo raaxo leh. Runtii waa wax aad u fiican. Ha uga tegin weel mugdi ah qiiq sida shumacyo kale, si fiican ayuu u gubtaa.
caadadii Qurxinta Udgoon udgoon shumac dhalo ah
Shumacyo udgoon ayaa loogu talagalay inay buuxiyaan booskaaga caraf udgoon; waxaan isticmaalnay saliidaha lagama maarmaanka ah ee ugu fiican si aan qolkaaga ugu buuxinno kuwa udgoonkaas qurxoon.
Adiga iyo qoyskaaga ayaa maskaxda lagu hayaa, 100% shumaca Soy ee dabiiciga ah waa mid aan sun ahayn, gubasho dheer, oo lagu sameeyay saliidaha lagama maarmaanka ah ee dabiiciga ah wuxuuna leeyahay 100% cudbi cudbi ah.
Cabbirka: 9cm (Width) * 11m (Dherer)
Midab: Cagaar ， Jaale, Buluug, iwm.
dhalada soodhaha dabiiciga ah shumac udgoon
Bixi adeeg muunad ah oo loogu talagalay qurxinta guriga iyo arooska
Shumaca weelka dhalada ee mason wuxuu isticmaalaa 100% wax soybean wax dabiici ah, taas oo deegaanka u fiican oo aan sun ahayn. Waxay qaadi kartaa 250 garaam oo wax ah si aad u gubato muddo dheer. Calaamadaha ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo dookhaaga. Midabka waxsoosaarka ayaa sidoo kale kaladuwan oo kuxiran udugga aad dooratay, sida oranji, casaan, iyo buluug. Waxay hadiyad u siisaa asxaabta, xubnaha qoyska, ama naftaada.
Udug xoog ama iftiin leh ayaa loo samayn karaa sida aad u baahan tahay, badanaa 1-10% ayaa udgoon. Shumacyadan soy-ga ah ee udgoon ee udgoon ayaa ah shumaca ugu cajaa’ibka badan suuqa maanta. Tayo tayo sare leh, shumacyo si khabiir ah loo farsameeyay oo umuuqda oo dareemaya wax qurux badan.
Cabir: 7.1cm (Width) * 5.6m (Dherer)
<< <Hore 123456 Xiga> >> Bogga 4/7